သင့် Android ဖုန်း၏ဘက်ထရီအတွက်လှည့်ကွက်လေးခု | Androidsis
သင်၏ Android ဖုန်း၏ဘက်ထရီအတွက်လှည့်ကွက်
ဘက်ထရီသည် Android တွင်ရှိသည့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးမှတ်ချက်များကိုအများဆုံးထုတ်ပေးသည်။ ၎င်းသည်တိုးတက်မှုအတွက်နေရာတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့်လည်ပတ်မှုကိုတိုးတက်စေရန်လှည့်ကွက်များကိုအမြဲရှာဖွေသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စမတ်ဖုန်းအသစ်တစ်လုံး ၀ ယ်သည့်အခါ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းများစွာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ပြီးသားအဖြစ်.
ဤတွင်ငါတို့သည်သင်တို့တစ်စီးရီးပြသပါ သုံးစွဲသူများကိုမသိသောလှည့်ကွက်များAndroid ဖုန်းရဲ့ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အကြံဥာဏ်များလိုအပ်နေသူများအတွက်အချိန်မရွေးအသုံးဝင်သောအရာ ခရီးသွားတဲ့အခါ.
2 ရာခိုင်နှုန်းကိုပြုပြင်ပါ၊ ဘက်ထရီချွေတာမှုသက်ရောက်စေရန်
3 ဖုန်းကို Reboot လုပ်ပါ
မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသင်သည်ဘက်ထရီမီနူးကိုအသုံးပြုလိုပါက၊ မည်သည့်ဖွဲ့စည်းမှုကိုမဆိုပြုလုပ်ရန်သို့မဟုတ်စစ်ဆေးရန်ပြုလုပ်လျှင်၎င်းကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည် သင့် Android ဖုန်း၏အမြန်ချိန်ညှိချက်များမှ။ ၎င်းသည်သယ်ဆောင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသောအရာဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုတစ်ကြိမ်ထက်မကကူညီနိုင်သည်။ ငါတို့ဘာလုပ်ရမလဲ။
အမြန်ချိန်ညှိချက်များမီနူးကိုပြပါ, မျက်နှာပြင်၏ထိပ်မှာပေါ်လာတဲ့တစ်ခု။ ပြီးနောက်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိဘက်ထရီသို့မဟုတ်ဘက်ထရီသိမ်းဆည်းခြင်းအိုင်ကွန်ကို နှိပ်၍ ဖိထားပါ။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်သည်၎င်း၏ settings ကိုသို့သွားပါ။ ထို့နောက်သင်လိုအပ်သောပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်နိုင်လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ဖုန်းတွင်ပါဝါချွေတာခြင်းစနစ်ရှိပြီးသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပြီးပြီ အချို့သောယခင်အခါသမယတွင်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့လည်း configure နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တာကဘက်ထရီရာခိုင်နှုန်းသတ်မှတ်ထားတဲ့အဆင့်ကိုရောက်တဲ့အခါသူအလိုအလျောက်သက်ဝင်စေမှာပါ။ အကြိမ်များစွာကျွန်ုပ်တို့အတွက်အသုံးဝင်သောအရာ။
ထုံးစံအရဘက်ထရီသည် ၁၅% အထိရောက်သောအခါ၎င်းကိုအသက်သွင်းသည်။ သို့သော်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ Android ဖုန်း၏ချိန်ညှိချက်များတွင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့အခြေအနေနဲ့ပိုကောင်းအောင်။ ထို့ကြောင့်ဖုန်းချိန်ညှိမှုများပြုလုပ်ပြီးဘက်ထရီအပိုင်းကိုရှာဖွေရမည်။
၎င်းအတွင်း၌ကျွန်ုပ်တို့သည်စွမ်းအင် (သို့) ဘက်ထရီကိုချွေတာရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဝင်ရောက်ပြီး၊ ပေါ်ထွက်လာမည့်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာ၎င်းကိုအလိုအလျောက်သက်ဝင်စေနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့လုပ်, ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းကိုရွေးပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ပေါ်တွင်အလိုအလျောက်သက်ဝင်သည်။ ထို့ကြောင့်နောက်တစ်ရာခိုင်နှုန်းထပ်မံရောက်ရှိသောအခါ၎င်းကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေလိမ့်မည်။
ဖုန်းကို Reboot လုပ်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ဖုန်းကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းကပေးစွမ်းနိုင်သည် သင်၏ပြproblemsနာများစွာအတွက်အဖြေလည်း သင်ဘက်ထရီနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုကူညီနိုင်ပါ။ ၎င်းသည်အံ့ဖွယ်အမှုများပြုလုပ်မည့်အရာမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ဖုန်းကိုအကြိမ်ရေဖြင့်ပြန်ဖွင့်ခြင်းက၎င်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်သောလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အပလီကေးရှင်းများနှင့်အဆုံးသတ်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့်။ ဒါကြောင့်များစွာသောကိစ္စများတွင်အလုပ်လုပ်နိုင်တစ်ခုခုပါပဲ။
လိုပဲကျနော်တို့ applications များနေသောဖြစ်ကြသည်ကိုစစ်ဆေးနိုင်သည် ပိုပြီးဒေတာကိုလောင်, ကျနော်တို့ဘက်ထရီနှင့်အတူတူလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ Android တွင်ရှိသည့်ဤ application တစ်ခုစီ၏သုံးစွဲမှုကိုမြင်နိုင်ခြင်း။ ဒါဟာအလွန်အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မရှိမဖြစ်အသုံးမလိုတဲ့ app တွေဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်းတဲ့စားသုံးစရာအစားထိုးစရာတွေရှိနိုင်လို့ပဲ။
သင်လုပ်ရမှာကတော့ Android ဖုန်းရဲ့ settings ကိုသွားပါ။ သူတို့အတွင်းမှာကျနော်တို့ဘက်ထရီ settings ကိုသွားရမယ်အဲဒီမှာရိုက်ထည့်ပါ ဘက်ထရီအသုံးပြုမှုကိုခေါ်အပိုင်း။ အချို့ဖုန်းများတွင်သင်သည်ဤရွေးစရာကိုအဓိကချိန်ညှိချက်များမီနူးတွင်ရနိုင်သည်။ ဒီရွေးချယ်မှုအတွင်းမှာ၊ ဒေါင်လိုက်အချက်သုံးချက်ကိုနှိပ်ပါ။ နောက်ပြီး application တွေရဲ့စားသုံးမှုကိုပြသနိုင်တဲ့ option ကိုရွေးပါ။
ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်လိမ့်မည် ဤအပလီကေးရှင်းများစားသုံးမှုအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုရှိသည် ငါတို့ရဲ့ Android ဖုန်းမှာရှိတာက ဖြစ်ရပ်များစွာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီမည့်အရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » သင်၏ Android ဖုန်း၏ဘက်ထရီအတွက်လှည့်ကွက်
ဒီခရစ္စမတ်ပိုကီမွန် GO ၏သတင်းအားလုံး
သစ္စာရှိကတ်များကိုမည်သည့်နေရာတွင်သုံးနိုင်သည်ကို Google Play ကအသိပေးလိမ့်မည်